Zidane oo kala doortay xidigaha Adrien Rabiot iyo Pjanić, midka uu xiiseenayo inuu la saxiixdo – Gool FM
Zidane oo kala doortay xidigaha Adrien Rabiot iyo Pjanić, midka uu xiiseenayo inuu la saxiixdo
Dajiye April 2, 2019
(Spain) 02 Apriil 2019. Warbaahinta gudaha dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday faahfaahin dheeraad ah ee ku aadan in laacibka kooxda Paris Saint-Germain ee Adrien Rabiot uu ku sii dhawaanayo ku biirista safka Real Madrid isbuucyada soo aadan.
Mustaqbalka Adrien Rabiot ayaa noqday mawduuc kulul sababtoo ah wuxuu diiday inuu qandaraaska u cusbooneysiiyo kooxda PSG, sidaasi darteed waxa lala xiriirinayay kooxo waa weyn oo Yurub ah sida Manchester United iyo Barcelona.
Adrien Rabiot ayaa iska diiday dalbyo badan ay kooxda Paris Saint-Germain ku dooneysay inay kaga saxiixato heshiis cusub, dhinaca kale laacibka reer France ayaa xur u noqon doono inuu ugu biiro beeca xurta ah kooxda uu doono, kadib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo socda.
Hadaba warar hoose ayaa waxay tilmaamayaan in Adrien Rabiot uu go’aansaday inuu ku biiro kooxda Real Madrid suuqa xagaaga ee soo socda, gaar ahaan kadib dib ugu soo laabashada Zinedine Zidane ee garoonka Santiago Bernabéu.
Ilo isku mid ah ayaa waxay sheegayaan in Zinedine Zidane uu kaga doorbidayo adeega Adrien Rabiot marka loo fiiriyo ciyaaryahanka kooxda Juventus ee Miralem Pjanić sababo badan, waxaana ka mid ah in wali uu yahay da’ayar, waxaase intaas u sii dheer inuu khibrad sare ka heysto ka ciyaarista khadka dhexe.
HORDHACA: Kulanka xiisaha badan ee kooxaha Elman Vs Jeenyo
Muxuu ka yiri tababare Unai Emery guushii ay xalay ka gaareen kooxda Newcastle United???